Xuquuqul Insaanka - BBC Somali
7 Sebtembar 2011
Cutubka 3aad ee Dastuurka Qabyada ah waxaa kujira 31 qodob kuwaasoo aad ugu saabsan xuquuqul insaanka, ayada oo aysan jirin cutub kale oo sida ay uga hadlayaan uga hadlaya. Si ka duwan dastuuradii hore ee Soomaaliya, Dastuurka Qabyada ah wuxuu aad u faahfaahinaayaa xuquuqul insaanka. Qeybta xigta ee tilmaamehaan waxay aad u eegi doontaa xuquuqo faahfaahsan, laakiin qeybtaan waxay eegeysaa habka guud ee Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ah uu u isticmaalay xuquuqul insaanka iyo xoojinta xuuqul insaanka iyo weliba xuquuqaha caamka ku ah meelaha kale ama ku jiray dastuuradii hore ee Soomaaliya balse ka maqan Dastuurka Qabyada ah.
Xuquuqda kujirta Dastuurka Qabyada ah si buuxda looma hirgalin doono durba markii la isku raaco dastuurka cusub, laakiin arintaasi waxay kuxirnaan doontaa inta dowladu ka heleyso kheyraad loogu tala galay ufulinta xuquuqdaas si horumarsan (Qodobka 32). Wax bixintaani waxay u muuqataa in ay ku taxaluqdo dhammaan xuquuqaha Dastuurka Qabyada ah kujira, xitaa kuwa aan u muuqan lahayn in kheyraad lagu fuliyo ay u baahan yihiin.
Dastuurka Qabyada ah ma cadeynaayo sida xuquuqaha loo dhaqan galinaayo hadii iyo markii dastuurka cusub la isku raaco lana hirgaliyo. Qodobka 44 wuxuu caddeynayaa in ay tahay qasab in ay macquul u noqoto dadku in ay u isticmaalaan maxkamadaha dib u sixida xad gudub lagu sameeyay xuquuqdooda iyo dhab ahaantii in dad kale ama ururo ay dooni karaan dib u sixida xuquuqda shakhsi leeyahay hadii uusan qofku sidaas naftiisa u samayn karin. Intaa waxaa dheer in Dastuurka Qabyada ah uu ku andacoodo dhisida Guddi Xuquuqul Insaanka u dooda kaasoo shaqadiisu tahay sare u qaadida xuquuqul insaanka wadanka, in heerar uu u dejiyo, inuu daba gal joogto ah ku hayo oofintooda iyo soo baarida hadii lagu xad gudbo. Dastuurka Qabyada ah wuxuu sidoo kale ku andacoonayaa in Guddigu helo kheyraadka uu howlahaan ku qabanaayo. (Qodobka 46).